नफापेको आइटम - मनोरञ्जन - नेपाल
फिल्मलाई ‘हाइप’ दिलाउने प्रभावकारी अस्त्र हो, आटम डान्स । तर, राज्जा रानीमा रेखा थापाको आइटम डान्स छ भन्ने कसैलाई पत्तै थिएन । निर्माण पक्षले निकै गोप्य राख्यो । सायद दर्शकलाई ‘सरप्राइज’का रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहेको थियो । त्यसैले त प्रदर्शनको अघिल्लो दिन अर्थात्
२० पुसमा मात्र युट्युबमार्फत गीत सार्वजनिक गरियो । तर, गिनेचुनेकी हिरोइन रेखाको आइटम दर्शक तान्न उपयोगी भएन । पाँच दिनमा यस गीतको नेपाली भर्सनले युट्युबमा एक लाख पनि भ्युज बटुलेन । अर्कातिर फिल्ममा सुरूआती दिनबाटै दर्शकको खडेरी लाग्यो, न त सकारात्मक प्रतिक्रिया नै पायो । त्यसो त राज्जा रानीमा आइटम मात्र होइन, महफ्वपूर्ण चरित्र पनि रहेछ रेखाको । तैपनि, माखो मरेको भए पो !
प्रकाशित: पुस ३०, २०७४
भैरवीलाई प्रदीपको बाईबाई ?
मन छुने कथा, मौलिक वाचन
शिल्पाको पहिलो पाइला
‘जामन: गुभाजुको आधिकारिक इतिहास’
नम्रताको जायराचाहिँ कहिले ?
अर्का युट्युबर हिरो
कपिलको ‘कमब्याक’ तर...
प्रकृति र प्रविधिको द्वन्द्व